Nandritra ny fihibohana vokatry ny valanaretina, nitombo be izay tsy izy ny fanararaotana ara-nofo nataon’ireo mpampiasa tamin’ireo mpiasa an-trano tao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Nitera-doza ho an'ireo mpiasa an-trano ny fihibohana nasain'ny governemanta nataony
Voadika ny 22 Septambra 2021 16:11 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 4 Jolay 2021)
Ireo vehivavy mpiasa an-trano niaritra herisetra ara-batana sy ara-nofo, miaraka amin'ireo mpiaro zo avy ao amin'ny Mission for Migrant Workers ary ny AMCB. Sary: Selina Cheng/HKFP.
Selina Cheng no nanoratra ity lahatsoratra manaraka ity ary nivoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 29 Jona 2021. Naverin'ny Global Voices navoaka indray araka ny fifanarahana iray hifampizara votoaty.
Niatrika fitomboana be tamin'ny resaka fanararaotana ara-batana sy ara-nofo ireo mpiasa an-trano ao Hong Kong — anatin'izany ny fanolanana— taorian'ny filazàna ofisialy nilazàna fa mijanona mihiboka any an-tranony izy ireo mba hisorohana ny fiparitahan'ny coronavirus.
Araka ny voalazan'ireo vondrona mpiaro zo, vokatr'ireo fepetra noho ny fisian'ny COVID-19 napetraka tsy maintsy ho arahan'ireo mpiasa an-trano dia tena nitombo be ny isan'ireo tranga henjana fanararaotana ara-batana nataon'ireo mpampiasa ao Hong Kong, isan'izany ny fikitihana faritra saropady, ny daroka, ny fanolanana, ny fanitàrana ora fiasàna ary ny tsy famelàna hatory.
Vao mainka nanaratsy ny zava-nanjo ireo niaritra fanararaotana ilay torohevitry ny governemanta mba hijanonana an-trano satria tsy navelan'ireo mpampasa hivoaka ny trano rehefa andro tsy fiasàn-dry zareo, ka tsy nahafahan'izy ireo nitady fanampiana.
Tamin'ny 2019 i Putri, 29 taona, avy any Indonezia, no nandray ny asany voalohany tany ivelany tao Hong Kong. Andro vitsy monja taorian'ny nanombohany niasa ho ana mpampiasa iray vaovao tao Yuen Long tamin'ny Febroary tamin'ity taona ity, nasain'ilay ramatoa mpampiasa azy izy hanotra ny vadiny, ka nandritra izany dia lalaovin-drangahy ny nonony. Ny andro manaraka, nanandrana nanolana azy rangahy io, teo amin'ny sezalava tao amin'ny efitrano fandraisana vahiny, toerana fatorian'i Putri rehefa alina.
Ny 2 Jolay, nandritra ny resaka ho an'ny mpanao gazety, nilaza i Putri fa nandà ny fikaotikatian'ilay rangahy.
“Natahotra mafy sy nangovitra aho tamin'izay fotoana izay,” hoy izy tao anaty fanambaràna iray tamin'ny fiteny Bahasa avy any Indonezia, tenindreniny, tao anaty antso mivantana ifanatrehan-tava (video call), saingy narovana ny mombamomba azy. “Naniry ny hiala aho saingy tsy nahafantatra hoe aiza no haleha hitadiavana fanampiana,” hoy izy.
Nolazain'i Putri fa in-droa io lehilahy io no nanolana azy, indray andro tamin'ny 3 ora maraina ary ny ampitso marainan'io indray avy eo. “Nanandrana nanakana azy aho, saingy natanjaka be izy,” hoy izy. Vokatr'izany dia nangataka izy hahazo matory any an-tafontrano, fangatahana izay nolavin'ilay ramatoa vadiny tany am-boalohany. Saingy taty aoriana dia nomena kidoro sy lamba firakotra izy hatoriany tany.
Notakiana tamin'i Putri ihany koa ny hiasàny manomboka amin'ny 5:30 maraina mandra-pisasaky ny alina satria ny sezalava tao amin'ny efitra fandraisana vahiny no toerana fatoriany, ary tsy afaka matory izy ny hariva raha tsy efa avy mijery fahitalavitra ireo mpampiasa azy.
Tamin'ny Martsa, tsikaritr'i Putri fa nitoe-jaza izy, ary nentin'ilay ramatoa hijery dokotera. Nambarany fa nasain'ireo mpampiasa azy hanàla zaza izy raha tsy izany dia ho esorina amin'ny asany. Nolavin'i Putri ny hanàla zaza ary nangataka ny fanampian'ny vondrona Indoneziàna iray mpiaro zo izy tamin'ny faran'ny Aprily, nandritra ny andro voalohany nitsaharany tao anatin'ny telo volana niasàna.
Ny 19 Mey, taorian'ny filazalazàna tany amin'ny pôlisy, nosamborina ilay lehilahy 44 taona mpampiasa azy, hoy ny pôlisy. Naiditra am-ponja ilay rangahy ary vesatra telo amin'ny tsy fahaizana mitondra tena sy fanolànana no nanenjehana azy teny amin'ny tribonaly, andro roa taorian'izay.
Vao mainka nanasaro-javatra ireo fepetra avy amin'ny governemanta
Niaritra ora maro niasàna sy tsy fahazoana andro fialàna sasatra ireo mpiasa an-trano tao Hong Kong nandritra ny valanaretina COVID-19. Noterena tsy maintsy nanao fitiliana COVID-19 ihany koa ry zareo, fitakiana lazain'ireo mpikatroka mpiaro zo fa miendrika fanavakavahana.
Ny fanadihadiana iray nataon'ny Asian Migrants’ Coordinating Body (AMCB) dia nahita fa manodidina ny 40.000 ireo vahiny mpiasa an-trano ao Hong Kong no tsy nomena andro fitsaharana nandritra ilay valanaretina, ary 20.000 ireo nahazo andro iray isambolana monja ho fitsaharana. Araka ny lalàna ao Hong Kong, mahazo andro iray isankerinandro hitsaharany ireo mpiasa an-trano ankoatry ny andro fialàna sasatra (congés).
Fanadihadiana iray hafa nataon'ny Mission for Migrant Workers nahita fa, tamin'ny 2020, tafakatra avo telo heny ny tatitra fisiana fanararaotana ara-nofo sy filàm-baniny niaretan'ireo mpiasa an-trano, ary nitombo 2 isanjato ny herisetra ara-batana. Eo amin'ny 7 hatramin'ny 10 ireo olona nilaza fa niasa nihoatra ny ora 11 isanandro, raha 3 amin'ny olona 10 kosa nilaza fa niasa nihoatra ny ora 16 isanandro.
Tany am-piandohan'ity taona ity, ny sekreteran'ny Asa sy ny Hasambarana, Law Chi-kwong, nanentana ireo mpifindra monina mpiasa an-trano mba hanohy hijanona any amin'ireo mpampiasa an-dry zareo mandritra ny andro fialàna sasatra. Nandeha lavidavitra kokoa i Elizabeth Quat, ilay mpanao lalàna mpomba ny “establishment” ka nanosoka hevitra fanibohana ireo mpiasa an-trano na dia amin'ny andro fialàn'izy ireny sasatra aza.
“Vao mainka nanaratsy ny toejavatra ny nitenenan'ny governemanta tao Hong Kong taminay mba hijanona an-trano: nampiasain'ireo mpampiasa io mba hanagadràna sy hanandevozana ireo vahiny mpiasa an-trano,” hoy i Sringatin, Indôneziàna iray mpikatroka avy amin'ny AMCB.
Tanaty trangam-panararaotana iray hafa, vehivavy indôneziàna roa, Herlina sy Uun, no niasa an-trano tao amina tokantrano iray tao Tuen Mun izay nanana mpiasa an-trano niisa efatra. Nampiandraiketina rihana iray avy ny vehivavy tsirairay tao amin'ilay trano misy rihana efatra, ary voaràra tsy mahazo mifampiresaka. Asa nampiandraiketina azy efatra ny fikarakaràna olondehibe roa, zaza enina, alika 75, sokatra valo ary “aquariums” valo sy tranom-boronkely.
Im-betsaka i Herlina no niharan'ny kapoka, nataon'ilay rangahy mpampiasa azy tamina fintana fanjonoana. Ho saziny dia indraindray izy no tsy avela hatory. “[N]anomboka tamin'ny Febroary 2020, nandritra ilay valanaretina Covid-19, noraràna tsy hiboaka any ivelan'ny trano izahay ary noterena ho ao an-trano no hiala sasatra. Ny handeha hividy sakafo ihany no nahazoanay alàlana hivoaka ny trano, na handefa vola,” hoy i Herlina.
Nogiazan'ilay masoivoho misahana ireo mpiasa an-trano ihany koa ny pasipaoro sy ny fifanarahana asa an'ireo vehivavy.
Nolazain'ny pôlisy fa tamin'ny 24 Jona tokony ho tamin'ny 5:00 maraina izy ireo no naharay tatitra momba ny daroka tamina fintana fanjonoana tao Tuen Mun. Nosamborina ny lehilahy iray 47 taona noho ny fiahiahiana azy tamina herisetra tsotra ary navotsotra tamin'ny 29 Jona rehefa nandoa sandan-keloka.
Tamin'ny Aprily, nasaina nanisaka “aquariums” telo lehibe i Herlina, saingy tsy navela hangataka fanampiana tamin'ireo mpiara-miasa aminy. Nianjera nandritra ny fanisahana azy ny iray tamin'ireo “aquariums”, niteraka ratra lalina tamin'ny tongotra havian'i Herlina. Nomena fanafody “antibiôtika” izy, ary tsy nentina tany amin'ny hôpitaly raha tsy ny ampitso, ka nahazoany zaitra niisa sivy, hoy ny fanambaràny.
Vehivavy roa hafa, Selly (solonanarana) sy Eden no niharana endrika fanararaotana ara-batana hafa sy filambaniny ara-nofo talohan'ny nahitàn-dry zareo tohana avy amin'ireo vondrona mpiaro zo.
Nandao ny tokantranon'ireo mpampiasa azy ireo vehivavy dimy ireo ary mipetraka any amin'ny toeram-pialofana ao amin'ny Mission for Migrant Workers sy ny AMCB, hoy ny solontenan-dry zareo. Ny 27 Jona, nosamborina noho ny fanaovana herisetra ilay rangahy mpampiasa an'i Herlina sy Uun, hoy ny voalazan'ilay ONG.
“Tsy ilain'ireo vehivavy hafa rehetra mpiasa ao Hong Kong ny hiaina anaty horohoro,” hoy ny fanambaràna iray navoakan'ny Asian Migrants’ Coordinating Body (Rantsana mpandrindra ireo Aziatika mpifindra monina). “Ny mifanohitra amin'izany, raha tsy azo antoka ny asan-dry zareo, afaka manome fampilazàna mialoha izy ireo ary mitady fepetra tsaratsara kokoa hiasàna. Mendrika hisitraka ny zo mitovy [ireo mpiasa mpifindra monina].”